KYC Zvinangwa | Law & More B.V.
Kuve mutemo wepamutemo & wemitero wakasimbiswa muNetherlands, tinosungirwa kutevedzera mitemo yeDutch neEU inorwisa kubiridzira mari nemirau inotimanikidza mitemo yekuteerera kuti tiwane humbowo hwakajeka hwekuzivikanwa kwedu mutengi tisati tatanga basa redu uye yedu hukama hwebhizinesi.
Iri rinotevera ratidziro inoratidza isu ruzivo rwatinoda mune dzakawanda zviitiko uye chimiro icho ruzivo urwu rwunofanirwa kupihwa kwatiri. Iwe kana iwe, pane chero nhambo, uchida imwe nhungamiro, isu tinokubatsira nemufaro mukuita iyi yekutanga.
Isu tinogara tichida kopi yakasarudzika yechokwadi gwaro, iro rinomiririra zita rako uye rinoratidza kero yako. Hatigone kugamuchira makopi akaongororwa. Kana mukaoneka mumuviri muhofisi medu tinokuzivisai toita kopi yemagwaro emafaira edu.
Inoshanda pasipoti yakasaina (notarized uye yakapihwa neApostille);
Kadhi yokuzivikanwa yeEurope;
Imwe yeinotevera mabviro kana makopi echokwadi akasimbiswa (asingapfuure mwedzi mitatu):
Chitupa chepamutemo chekugara;
Bhiri ichangoburwa yegesi, magetsi, imba yekufonera kana zvimwe zvinoshandiswa;
Chirevo chemutero chiripo;
Chirevo kubva kubhenji kana chezvemari institution.
Muzviitiko zvakawanda isu tinoda tsamba yekutaura yakapihwa nehunyanzvi hwekuita basa iye kana iye anoziva munhu iyeye kweanopfuura gore (semuenzaniso notary, gweta rakarondedzerwa accountant kana kubhengi), iyo inotaura kuti munhu wacho anoonekwa seab munhu ane mukurumbira uyo asingatarisirwe kubatanidzwa mukutengesa zvinodhaka zvisiri pamutemo, akarongerwa chiitiko chematsotsi kana ugandanga.
Kuteerana nezvinodiwa zvekuteerera zvinodiwa mune dzakawanda kesi isu tichafanirwa kumisa yako yazvino bhizinesi kumashure. Ruzivo urwu runoda kutsigirwa nezviratidzo zvegwaro, dhata uye yakavimbika masosi eruzivo, semuenzaniso:
Ichangobva kubudiswa kubva kune yekutengesa registry;
Mabrochure ezvekutengesa uye webhusaiti;
Kusimbisa kwaunobva upfumi hwepfuma uye mari
Chimwe chakakosha kutevedzera zvinodiwa isu kuti tisangane ndechekugadzirawo sosi yekutanga yemari yaunoshandisa kubhadhara Kambani / Entity / Foundation.
Yekuwedzera Gwaro (kana iyo Kambani / Bhizimusi / Nheyo iri kubatanidzwa)
Zvichienderana nerudzi rwe maseti aunoda, chimiro icho chaunoda zano uye chimiro chaunoda kuti titange, unofanirwa kuzopa zvimwe zvinyorwa.